Faahfaahinta Qalinjabinta »Jaamacadda Hodges
Kusoo dhawow Qalinjabinta Hodges !!!
Waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad kasbatay shahaadadaadii oo aad qaadatay talaabada xigta mustaqbalkaaga. Aad ayaan ugu faraxsanahay, kuna faraxsanahay, mid kasta oo idinka mid ah! In kasta oo cutubkan laga yaabo inuu gabagabo yahay, haddana waa bilowga fursado badan oo shahaadadaada cusubi ku siin doonto safarkaaga ka hor.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno sanadkan sanadkayaga Xafladii Bilaabashada 31aad!
Bilawga Qalinjabinta Jaamacadda Hodges
Taariikh: Axad, Juun 20, 2021
Waqtiga: 4:00 pm
Goobta: Hertz Arena, 11000 Everblades Parkway, Estero, Florida 33928
Ogow Intaadan Bixin Macluumaadka
Sannad kasta, xafladda qalin-jabintu waa munaasabadda tacliinta ugu muhiimsan ee Jaamacadda Hodges ay u qabato ardayda iyo dhammaan qoyska Hodges. Waa dhammaadka sannado shaqo adag, adkeysi, iyo u heellan shaqsiyadeed ardayda iyo qoysaska si isku mid ah. Maalin sidan oo kale ah waa in loo dabaaldegaa. Kuweena Xafladii Bilaabashada 31aad xushmeyn doonaan xafladaha dhaqameed ee la socda dabaaldega guushaada waxbarasho. Xaflada Bilaabashada sanadkan ayaa u furan arday kasta oo ka qalin jabiya Juun 6th, 2019 illaa Meey 2, 2021.
Hoosta, waxaan ku bixinay Liiska Hubinta Qalinjabinta oo loogu talagalay in laguu diyaariyo maalinta qalinjabinta iyo inaad ka jawaabto su'aalaha la xiriira xafladda qalinjabinta Liiskan hubintu wuxuu beddelayaa ku celcelinta tababarka qalin-jabinta rasmiga ah. Fadlan dib u eeg qayb walba wixii macluumaad dheeri ah oo aad u baahan doonto inaad u diyaar garowdo 20-ka Juunth Maalinta Qalinjabinta.
1. Dhamaystir dhammaan shuruudaha shahaadada
Waa masuuliyad arday kasta inuu buuxiyo Foomka Ujeeddada Qalin-jabinta bilowga kulankiisa / keeda ugu dambeeya. Fadlan hubi inaad ka hubisay Lataliyahaaga Khibradda Ardayda si aad u xaqiijiso inaad buuxisay dhammaan shuruudaha shahaadada Jaamacadda sida ku xusan buuga jaamacadda. Haddii aadan buuxinin dhammaan shuruudaha, shahaadadaada lama bixin doono illaa dhammaan shuruudaha la buuxiyo. Fadlan xusuusnow inay tahay masuuliyadaada inaad hubiso in dhammaan shuruudaha la buuxiyo.
2. Dalbo Koofiyaddaada, Goonnadaada, iyo Tassel-kaaga
Ardayda doonaya inay kaqeybqaataan xaflada qalinjebinta waxaa looga baahan yahay inay iibsadaan shaashadda Qalinjabinta (koofiyad, goono iyo funaan) ugu dambayn May 21, 2021. Ardayda waxaa lagu dhiiri gelinayaa inay si wanaagsan u dalbadaan nidaamkooda ka hor waqtigan loo qabtay si loo hubiyo in waqtiga la keenayo. Iibsigan kuma jiraan qayb ka mid ah khidmadda Qalinjabinta. Waxyaabahan waxaa laga dalban karaa internetka Herff Jones ama shaqsi ahaan munaasabadda Dabaaldegga Qalinjebinta.
3. Xurmada Xurmada, Hoodyada, iyo Biinanka
Waxyaabahan sharafeed ayaa loo heli karaa in laga soo qaado xerada Fort Myers, ama waxaad sidoo kale weydiisan kartaa saaxiib ama xubin qoyskaaga ah inay kuu soo qaadaan fiilooyinka. Waxaad sidoo kale ka soo qaadan kartaa maalinta bilowga.
4. Dalbo Sawirka Qalinjabinta
Jaamacadda Hodges waxay u kireysatay GradImages inay noqoto sawirqaade rasmi ah oo bilaabaya dugsigeenna iyo / ama xafladda bilowga. Saddex sawir oo arday kasta oo qalin-jabiya ah ayaa la qaadaa inta lagu jiro dhacdada:
Intaad jidkaaga usocoto masraxa.
Adoo gacanta u ruxaya gacanta madaxweynaha bartamaha masraxa.
Ka dib markaad masraxa ka baxdid.
Caddaymahaaga ayaa diyaar u noqon doona inay ka daawadaan khadka tooska ah isla marka ay tahay 48 saacadood ka dib xafladda. In kasta oo aysan jirin wax waajib ah oo dalbanaya, waxaad keydin doontaa 20% amarrada $ 50 ama ka badan kaqeybgalkaaga. Diiwaangelinta hore waa si fudud oo lagu hubiyo in macluumaadkaaga xiriirka uu yahay kuwa ugu dambeeyay ee la socda GradImages, sidaa darteed waxay ku siin karaan caddeyntaada bogaadin sida ugu dhaqsaha badan. Si aad horay isugu diiwaan geliso cadeynta bilowgaaga, fadlan booqo Sawirrada Darajada
Iyada oo qayb ka ah qalinjebintaada iyo ka-qaybgalkaaga diiwaangelinta ka hor, GradImages ayaa kuu soo diri doonta emayllo, warqado caddayn sawir qaadis ah, waxayna soo diri kartaa farriin qoraal ah oo ikhtiyaari ah.
5. Dhamaystir dhammaan shuruudaha shahaadada
Qalinjabiyeyaasha suurtagalka ah waa inay gudbaan oo ay dhammaystiraan dhammaan shuruudaha shahaadada Waxaa laga yaabaa 2, 2021, si loogu qoro Barnaamijka Bilowga.
Fadlan hubi inaad cusboonaysiiso dhammaan macluumaadkaaga Xafiiska Diiwaanhayaha. Faahfaahinta ku daabacan shahaadadaada waxaa go'aamin doona macluumaadka aan kuugu hayno faylkaaga. Dibloomooyin ayaa loo diri doonaa ardayda cinwaanka faylka ku jira.
Waxaan ardayda oo dhan ka codsaneynaa inay ka hubiyaan xaalada koontadooda Xafiiska Xisaabaadka Ardayda intaan la bilaabin. Fadlan la soco in ku guuldareysiga inaad qanciso dhammaan waajibaadka dhaqaale ee jaamacadda ay kaa hor istaagi karto inaad hesho diblooma iyo / ama qoraalladaada waqtiga ku habboon.
Qalinjabinta Macluumaadka Ardayda
Imaanshaha & Golaha
Fadlan qorsheyso inaad timaadid ugu dambeyn 1:30 pm si dib loogu eego tilmaamaha xafladda.
Markay yimaaddaan, qalin-jabiyayaashu waxay ka soo gali karaan irridda Bari ee fagaaraha Hertz.
Arday kastaa oo qalin jabiya ayaa kaarkiisa / magaceeda ka qaadan doona miisaska ku yaal gadaasha masraxa. Kaararka waxaa lagu daabacay magacaaga sharciga ah wuxuuna ku habboon yahay waxa lagu daabacay barnaamijka bilowga.
Markaad hesho kaarkaaga, fadlan buuxi qaybta macluumaadka xiriirka ee ku yaal dhabarka kaarka sawir qaadaha.
Kaadhkan waa inaad sidataa illaa laga siinayo ogeysiiska kahor inta uusan ka gudbin marinka.
Kaarka sidoo kale wuxuu ku qornaan doonaa kursigaaga geeska gacanta midig ee hoose.
Fadhiga qalin-jabinta waxaa loo qoondeyn doonaa lambarka kursi midkood Qaybta 115, 116, ama 117 alifbeeto ahaan, iyo barnaamij ahaan.
Fadlan la soco in si aad u hesho kursigaaga, waa inaad ku socotaa dabaqa kore. Haddii tani ay tahay dhibaato fadlan la socodsii shaqaalaha jaamacadda kahor Maalinta Bilaabidda.
Hubso inaad haysato kaarkaaga magacaaga intaadan bilaabin howsha.
Koofiyado dheeri ah iyo goonno ayaa loo keeni doonaa xafladda haddii taadu u baahan tahay in la beddelo sidaa darteed fadlan u arag xubin ka tirsan shaqaalaha jaamacadda haddii aad wax ka qabto. Fadlan ogow inay jiri doonaan xaddi kooban oo koofiyado iyo goono dheeri ah xafladda; haddii dhibaatooyin ka jiraan koofiyaddaada iyo / ama goonnadaada 4 maalmood ama ka badan xafladda ka hor, fadlan u kaalay xerada Fort Myers si aad ugala hadasho Xafiiska Adeegyada Gargaarka wixii ku saabsan beddelidda iyo / ama goonnada.
Koodhka Labiska & Anshaxa
Fadlan diyaar u noqo iftiin!
Waxaa lagaa filayaa inaad xirato dharka tacliimeed ee buuxa (koofiyad, goono & xadhig sharaf ama daboolka sayidka, haddii ay khuseyso) muddada xafladda qalin-jabinta.
Qalinjabiyeyaashu waxay xiran doonaan koofiyadooda iyo goonnada ay ku labistaan ​​markay yimaadaan Hertz Arena. Shaqaalaha ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan.
Fadlan uga tag dhammaan waxyaabaha qiimaha leh iyo waxyaabaha shakhsi ahaaneed qoyska, saaxiibbada ama martida.
Dharka dhaqanku wuxuu ku xirnaa goonnada:
Ragga - shaati dhar ah oo leh qoorta, dhogor madow, xarig madow oo madow, iyo kabo madow.
Haweenka - dharka madow, ama goonnada ama surwaalka iyo goonnada, oo leh kabo madow oo xiran. Kabaha ciribta sare laguma talinayo. Flip-flops, kabaha tennis, iyo kabo cad waa in aan la gashan.
Haddii loo baahdo, fadlan ku riix goonnadaada bir bir ah.
Daboolka waa inuu si toos ah u jiifaa iyadoo shaashadda ay ka sudhan tahay dhinaca hore ee midig. Qalin jabiyayaashu waa inay ka taxaddaraan inaysan u oggolaan tasselku inuu farageliyo inta sawir laga qaadayo.
Haddii ay khuseyso, xargaha sharafta waa in lagu xiraa qoorta oo leh qolal ka soo laalaada dhinac kasta. Xargaha sharafta waxaa loo qaybin doonaa iyadoo la raacayo siyaasada jaamacadda:
Lacag & Casaan loogu talagalay summa cum laude (3.90-4.0 GGPA);
Double Red for magna cum laude (3.76-3.89 GGPA); ama
Double Silver oo ah cum laude (3.50-3.75 GGPA).
Jaamacadu waxay samaysaa isku day kasta oo ay ku qorshayso kuna qabato xaflad macno leh oo sharaf leh. Aqoonsiga guulahaaga waxbarasho waa in lagu ixtiraamo si xushmad leh. Anshax xumo, isqabqabsi, ama jiritaanka aalkolo ama daroogo waxay sababi doonaan in si dhaqsi leh looga saaro waxayna sababi kartaa in dibloomadaada ay heysato jaamacada.
Ardayda ka qalin jabisa waxaa lagula talinayaa inay istcimaalaan qolka nasashada inta aysan bilaaban xaflada, maadaama aan laguu oggolaan doonin inaad ka tagto kuraastaada markay xafladu bilaabanto.
Qalinjabiyeyaasha waxaa looga baahan yahay inay fadhiistaan ​​barnaamijka oo dhan.
Qalin jabiyayaashu waxay fadhiyaan qaybaha 115, 116, ama 117 si ay ugu socon doonaan masraxa. Amarkani wuxuu ku soo beegmayaa sida ay darajooyinka ugu qoran yihiin barnaamijka bilowga, alifbeetada, iyo heerka.
Waxaa lagaa codsan doonaa inaad hoos ugu degto aagga sagxadda 3:30 pm Waxaad samayn doontaa saf badan intii suurtogal ah ee ka dambeysa masraxa. Markuu socodku bilaabmo, ardaydu waxay sii wadi doonaan inay u guuraan aagga sagxadda sida ugu dhakhsaha badan. Ardayda goor dambe timaadda waxaa laga dhigi doonaa kuwa ka dambeeya dhammaan kuwa kale ee ka qalin-jabiyay lagana yaabee inaysan ag fadhiisan doonin kuwa kale ee qaata isku shahaado iyo kuwa waaweyn. Fadlan hubso inaad ku timaadid waqtiga.
Gudoomiyaha Marshal Grand Marshal
Musharixiinta la shaqeeya
Barnaamijyada bilowga ah ayaa lagu siin doonaa markaad gelayso dabaqa weyn.
Gali dabaqa weyn ee dhanka woqooyi ee fagaaraha. U soco dhanka dambe ee kuraasta, u leexo midig, una leexo midig markale marinka dhexe.
Faahfaahinta Munaasabada Bilaabida
Ka dib marka ardayga iyo afhayeenka martida la dhammeeyo, madaxweynuhu wuxuu weydiisan doonaa dhammaan musharrixiinta shahaadada mastarka inay fadlan istaagaan.
Darajooyinka Master-ka ka dib waxaa bixin doona madaxweynaha.
Marka qaybtani dhammaato, kadib ayaa laguu diri doonaa aagga masraxa oo aad marba marxaladda ku dul mari doontid markiiba si aad u aragto shaqsi horay loo sii qoondeeyay.
Fadlan u dhiib kaarkaaga magaca wajiga si uu isagu / iyadu u akhrisan karo magacaaga.
Isla marka aad dhiibto kaarkaaga magaca, u gudub marxaladda sida ku cad jaantuska.
Sida saxda ah ee looga aqbali karo daboolka dibloomada ee Dr. Meyer waa gacantaada bidix. Kadib, gacantaada midig u gacan qaado.
Halkaani waa halka lagu qaadayo mid kamida sawirada fadlan xusuusnow inaad dhoola cadeyneyso.
Grand Marshal ayaa markaa turjumidaada kaa rogi doona oo gacanta kuu salaami doona.
Shabakadda Qalinjabiyeyaasha ayaa ku siin doonta hadiyad, macallimiintuna way kuu hambalyeyn doonaan ka hor intaadan ku noqon kursigaaga.
Fadlan fariiso marka aad ku noqoto kursigaaga.
Bachelor's, Associate, iyo shahaadooyinka shahaadada waxay raaci doonaan isla nidaamyada.
Haddii aad ku fariisato Qaybta B, fadlan raac tilmaamaha lagu siiyay si aad u gasho marxaladda oo aad ugu noqoto kursigaaga.
Amarka dhaqaale xumida:
Shaqaalaha Jaamacadda Hodges ayaa kula socodsiin doona goorta safkaagu ka bixi karo.
Fadlan ha joojin markaad gaarto aagga masraxa gadaashiisa maadaama ardayda kale ee qalin jabisay ay isku dayayaan inay baxaan.
Isku day inaad horay u sii qorsheysato goobta kulanka qoyskaaga iyo asxaabtaada maxaa yeelay waxaad ka bixi kartaa fagaaraha labada dhinac gadaasha masraxa.
Idaacadda tooska ah
Xafladda bilowga tooska ah waxaa laga daawan karaa boggeena guriga 4:00 galabnimo Juun 20, 2021.
Tilmaamaha Hertz Arena
Dhanka woqooyi: U qaado I-75 ilaa Bixitaanka 128 (Wadada Alico). U soco bariga wadada Alico ilaa Ben Hill Griffin Parkway. U qaado Ben Hill Griffin qiyaastii 3.5 mayl koonfur. Arena wuxuu ku yaal dhinaca midigta.
Koonfurta: Ka bax I-75 si aad uga baxdo 123 (Wadada Wadada). U jihayso dhanka bari wadada Corkscrew. Qaado Ben Hill Griffin woqooyi, Arena waxay ku taalaa dhanka bidix.
Goobta gawaarida la dhigto waxay fureysaa seddex saac ka hor Munaasabada Bilaabashada.
Waxa jira baarkinno ballaadhan oo laga heli karo Hertz Arena meelaha baabuurta la dhigto ee ku xeeran.
Baabuur lacag la'aan ah
Xeerarka Hertz ee keenista alaabada shaqsiga ah ***** Fadlan Akhriso
Hertz Arena waxay leedahay sharciyo adag oo ah waxa jira oo aan la ogolayn in xarunta la keeno. Guji HALKAN xeerarkaas, kuwaas oo si adag loo dhaqan gelin doono.
Martidu waa inay yimaadaan inta udhaxeysa 3:00 ilaa 3:30 pm
Fagaaraha wuxuu bixiyaa fadhiga furan, tikidhada looma baahna.
Fadhiga naafada ah ayaa laga heli karaa dhinaca koonfureed. Waxaa jira meel bannaan oo loogu talagalay kuraasta curyaamiinta iyo qaar ka mid ah kuraasta taagan. Hal marti ayaa la fadhiisan kara martida naafada ah.
Fadlan la soco in gawaarida carruurta, buufinnada, iyo ubaxyada aan laga oggolayn fagaaraha. Istaraatijiyadaha, buufinta, iyo ubaxyada ayaa laga hubin doonaa shaqaalaha Hertz waxaana lagu hayaa miiska weyn waxaana laga yaabaa in la soo qaado xafladda ka dib.
Hal meel oo loo tanaasulo ayaa u furnaan doonta cunnada iyo cabitaanka dhinaca koonfureed ee fagaaraha.
Waalidiinta, qoysaska, iyo asxaabta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay fadhiistaan, maadaama ka tagitaanka xafladda ay muujineyso ixtiraam xad dhaaf ah dhammaan ka soo qeyb galayaasha.
Fadlan xusuusnow qofna looma ogalo inuu sagxadda weyn ama jaranjarada ka galo sawirro.
Sawir qaade xirfad leh ayaa loo shaqaaleeyay si uusan u qaadin sawirro aan waajib ku ahayn arday kasta oo qalin jabiya.
Sawirada waxaa laga qaadi karaa ehelka iyo asxaabta meelaha fadhiista.
Xagee u kacaa inaan ka soo qaado fiilooyinka sharaftayda?
Xargaha sharafta ayaa loo heli karaa ka soo qaadashada xerada Fort Myers, ama sidoo kale waxaad weydiisan kartaa saaxiib ama xubin qoyskaaga ah inay kuu soo qaadaan fiilooyinka. Waxaad sidoo kale ka soo qaadan kartaa maalinta bilowga.
Goormaan qaadan karaa diblooma?
Markaad qalinjabiso Hodges, waxaad heli doontaa labadaba diblooma dijital ah iyo diblooma dibedda ah. Tilmaamaha ku saabsan helitaanka dibloomada dijital ah ayaa loo diri doonaa emaylkaaga Hodges. Dibloomadaada jirka waxaa laguugu soo diri doonaa cinwaanka faylka ku jira.
Yaan la xiriiraa haddii fariin qalad ah ay dhaceyso markaan dhagsiiyo xiriiriyaha bogga qalin jabinta?
Markaad codsato qalin-jabinta adigoo dhammaystiraya foomka Ujeeddada Qalin-jabinta, nidaamkeennu kuu oggolaan maayo inaad mar labaad sidaas sameyso. Tani waa sababta aad u heli lahayd fariin qalad ah. Haddii aadan dhammaystirin Foomka Ujeeddada Qalin-jabinta, fadlan la xiriir Xafiiska Diiwaan-geliyaha 239-938-7818 ama registrar@hodges.edu.
Sideen u dalbadaa tikidhada qalinjabinta? Haddii aan u baahanahay tikityo badan qalinjebinta, maxaan u baahanahay inaan sameeyo?
Markii aad dhammaystirtay foomkaaga 'Ujeedada Qalin-jabinta', waxaa jirtay meel lagu daro tirada qoysaska / asxaabta ka qaybgeli doonta. Ma daabacno tikidhada qalinjebinta, markaa haddii aad leedahay qoys / saaxiibbo dheeraad ah oo jeclaan lahaa inay ka soo qayb galaan, waa la soo dhaweynayaa!
Ma qurxin karaa furka qalin jabinta?
Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad qurxiso furkaaga! Fadlan maskaxda ku hay in loo qurxiyo inay ka muuqato dhammaan xiisaha aad u qabatay, si kastaba ha noqotee, waa in lagu sameeyaa dhadhan fiican iyo ixtiraam leh. Fadlan xusuusnow in faashadaada lagu dhejin doono daboolkaaga - fadlan ha dul saarin daboolkaaga wax mamnuucaya in faashadda la saaro daboolkaaga.
Miyaan ka qaadan karaa dharkeyga xafladda qalinjabinta?
Waxaan si weyn kugula talineynaa inaadan sugin ilaa xaflada qalin jabinta inaad soo qaadato ama iibsato regalia. Waxaan xafladda ku haysan doonnaa qaddar aad u kooban oo tiro ahaan aad u xaddidan. Xulashada ugu haboon ayaa ah inaad dalbato regalia markasta http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ laakiin maalinta ugu dambeysa ee la dalbanayo ayaa ah Waxaa laga yaabaa 21, 2021. Ardayda waxaa lagu dhiiri gelinayaa inay si wanaagsan u dalbadaan nidaamkooda ka hor waqtigan loo qabtay si loo hubiyo in waqtiga la keenay.
Yaan kala xiriiraa su'aalaha qalin-jabinta?
Wixii Regalia ah (koofiyad / goon), daboolida masterka, tassels, looxyada diblooma, jaantusyada qadarinta, biinanka ardayda, qalin jabinta, iwm. universitystore@hodges.edu.
Dibloomada, xadhkaha sharafta, qoraallada (shahaadada ka dib ayaa la bixiyaa), la xiriir Xafiiska Diiwaan-geliyaha (239) 938-7818 ama registrar@hodges.edu
Ku Xidhnow #HodgesAlumni
Shabakadda Qalinjabiyeyaasha Jaamacadda ee Hodges waa wadiiqadaada si aad ugu xirnaato isku xirka iyo la kulanka saaxiibadaa Hodges Alum. Ma jiraan wax kharash ah oo looga qaybqaato iyo faa'iidooyin badan oo xubin looga noqdo. Fadlan ka dhig Shabakadda Qalinjabiyeyaasha cusboonaysiinta cinwaan kasta iyo isbeddelada shaqada, iyo / ama guulaha xirfadeed si aan ula wadaagno guushaada kuwa kale. Nagala soo xiriir alumni@hodges.edu. Cinwaanka emaylka ee hadda jira ayaa muhiim u ah xiriirinta ardayda iyo helitaanka macluumaadka ardayda.